Muxuu ka yiri Lampard suurtogalnimada ay ugu soo bixi karaan Champions Leagu xilli ciyaareedka dambe? – Gool FM
(Manchester) 23 Luulyo 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa sheegay in kooxdiisa ay wali fursad u heysato inay u soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Chelsea ayaa xalay guuldarro 5-3 ah kala soo kulantay kooxda Liverpool oo ay ku booqatay garoonka Anfield, taasoo ka dhigtay in kulankeeda soo aadan ay la ciyaari doonto Wolverhampton Axada ay u baahan tahay inay hesho 1 dhibic, si ay ugu soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Haddaba tababare Frank Lampard ayaa kulanka kaddib wuxuu la hadlay warbaahinta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxay ahayd inaan dareeno inaan guul gaari karno, sababtoo ah qaar badan ma fileynin inaan ka mid noqon doono afarta sare, laakiin hadda aayaheena gacmaheena ayey ku jiraan”.
“Kulanka soo aadan waxaan ku ciyaari doonaa Stamford Bridge, balse waxaan wajihi doonaa koox aad u adag waana Wolverhampton, sidoo kale waxaan aaminsanahay ciyaartoyda kooxdeyda”.
“Wax badan ayaan ku arkay labadii kulan la soo dhaafay ee aan la ciyaarnay kooxaha Manchester United iyo Liverpool, kooxda waxay ku ciyaartay shaqsiyad weyn labadaas kulan, waana inaan sii wadnaa Axada”.